09 / 07 / 2021 10 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 280 Views စာ0မှတ်ချက် ၂၁၃၂၈ Seinfeld, သရုပ်ဆောင်, Brent Waller, ကျော်ကြား, နာမည်ကြီးပရိတ်သတ်တွေ, ကျြောစောသော, ကျော်ကြားပရိတ်သတ်တွေ, George Costanza, Ideas, Lego, Lego Ideas, ဥပဒေ, အသေးစား, Seinfeld
အသစ်ကနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ကဘာလဲ Lego Ideas Seinfeld minifigures? စီးရီးမှသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ကထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုခဲ့ပေမည်၊ သို့သော်သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Lego Ideas အစုံ, ၂၁၃၂၈ Seinfeldဂျော့ခ်ျကော့စန်တာ၏သရုပ်ဆောင်သည်မော်ဒယ်အသစ်နှင့်သူ၏ပထမဆုံးအသေးစားရုပ်ပုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ တစ် ဦး လမ်းကြောင်းသစ်ဆက်လက် သူတို့ရဲ့ပလပ်စတစ် counterp တုံ့ပြန်ကြယ်၏arts.
ကြည့်ရသည်မှာယခုကျွန်ုပ်သည် Lego မှ။ ဒါကအကောင်းဆုံးငါ့ကို Legoland အခမဲ့တစ်သက်တာဝန်ခံချက်ရခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ငါ Pez မဘယ်လိုနေသလဲ သိသာထင်ရှားသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းကျောင်းတွင်ထိုအတန်းသည်ပထမတန်းစားမဟုတ်လော https://t.co/sgQOn2DQsv
- ဂျေဆင်အလက်ဇန်းဒါး (@IJasonAlexander) ဇူလိုင်လ 7, 2021
သည်အခြားနာမည်ကြီးတွေခြောသူတို့ရဲ့အထင်ကြီးခဲ့ကြပေမယ့် Lego ထိုကဲ့သို့သောလာမည့်အဖြစ်ပွဲ ဦး ထွက် Marvel ကြယ် Simi Liu သည် Shang-Chi အစုံအားလုံးကိုဝယ်သည်ဂျိမ်းစ်အလက်ဇန်းဒါးသည် Seinfeld ရှိဂျော့ခ်ျ၏သွင်ပြင်ကိုပုံဖော်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးစီးရီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ LEGOLAND နှစ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဟုမြင်ရသည်။
ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် Lego Jason သည်တောင်းဆိုချက်ကို Group မှတုံ့ပြန်သော်လည်းအနည်းဆုံးမင်းသားသည်မိတ္တူတစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် ၂၁၃၂၈ Seinfeld Fan Designer Brent Waller အနေဖြင့်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းအခြားတစ်ယောက်အားသူ့ကိုမပို့သင့်ပါကသူ့ကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ငွေမျက်နှာပြင်ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောကျန်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ရမည် ၂၁၃၂၈ Seinfeld သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ပေါင် ၆၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၇၉.၉၉ / ယူရို ၇၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်သောငွေများနှင့်အတူ ၁,၃၂၆ အပိုင်းအစများဖြစ်သည်။ Lego ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့သည့် VIP များသည်ကြယ်များဖြင့်ကုသမှုအချို့ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ငါတို့မှာအများကြီးပိုပြီးအကြောင်းအရာရရှိပါသည် Lego Ideas သင်တစ် ဦး အပါအဝင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ဖတ်ရန်မော်ဒယ် ပုံရိပ်တွေပြခန်း နှင့်တစ်ဦး မူရင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ.
← Lego Ideas အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအရေးပေါ်ယာဉ်များရွေးချယ်မှုကိုတိုးမြှင့်သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: patကရာဇ် Palpatine →